Iskaashiga Istaraatiijiga ah ee Warshadaha Difaaca ee BMC
BMC 2019 Fair IDEF, qandaraaslayaasha ugu horeysay taangiga Altay Turkey ee wax soo saarka mass of Aselsan, Roketsan, Difaaca Madaxweynaha Industry Prof. MKEK iyo Havelser Dr. Wuxuu la saxeexday heshiis ka qayb galka 'mailsmail Demir'. BMC [More ...]
Türk Loydu iyo HeliPlat waxay kala saxiixdeen iskaashi muhiim ah warshadeena difaaca. Inta udhaxeysa Türk Loydu iyo HeliPlat; wadashaqeynta borotokoolka tijaabooyinka iyo kontaroolada si loo hubiyo shahaadada helikabtar helikabtar / shuruudaha shatiga, Türk Loydu [More ...]
Warshadaha Warshade Devi ASELSAN waxay la kulmeen warshadaha ka soo jeeda Bursa
Bursa Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha, Turkey ayaa keenay indigenization iyo qarameynta oo bilaabay la warshadaha difaaca in ay taageero siin abaabulka ee shirkadaha shirkadaha sarsare ee hoggaaminaya difaaca waafaqsanayn ujeedada wakiilada ganacsiga ASELSAN Bursa wada. [More ...]
Taageero laga heloBBB xagga duulista, nidaamyada tareenka iyo waaxda warshadaha difaaca: Bursa Eskişehir Bilecik Agency Agency ayaa ku dhawaaqday natiijooyinka codsiyada Barnaamijyada Taageerada Maaliyadeed ee 2016 Sanadka. Duulista ka timaadda Bebka - Nidaamyada Tareenka ee Nidaamka Raadinta ee Qeybta Warshadaha Difaaca… BEBKA, [More ...]
Tallaabada 3aad ee buundada oo ka socota Difaaca Waqooyiga
3 oo ka socota Difaaca Waqooyiga. tallaabada buundada: Difaaca Waqooyiga, 3. ka mudaaharaadaya meeleeynka ugu dambeysa ee buundada ilaa Sarıyer halkaas oo wadooyinka isku xidha buundadu ay dhaafeyso. Wadahadallada gunnada ah ee Yavuz Sultan Selim Bridge! Difaaca Waqooyiga [More ...]
Cabbirka warshadaha difaaca ayaa la labanlaabi doona mashruuca weyn ee 52: jawaabaha 8 waxaa lagu qiimeeyaa barnaamijka 'Initiative for Training' (BEU), iyo feyl soo jeedinta ayaa loo diyaarinayaa. U soo Jeedinta Soo-jeedinta Mashruuca Soo-iibinta Helikabtar Xeebeedka-Xeebaha-badan-leh [More ...]